Ciladda ogaanshaha neerfaha iyo qiimeynta daaweynta hadalka (da'da koritaanka) | Tababarka Garashada
Cudurka maskaxda ku dhaca iyo qiimaynta daweynta hadalka (da'da koritaanka)
Ayaa loogu talagalay: Caruurta iyo dhallinta yaryar ee leh dhibaatooyinka iskuulka
Mudo intee leeg ayay soconaysaa: 2-3 maalmood qiyaastii
Waa imisa 384 €
Sida ay ku dhamaanayso: Warbixinta ugu dambeysa iyo ogaanshaha cudurka (DSA)
Meesha qiimayntu ka dhacdo: Via Ugo Bassi, 10 (Bologna)
Sida loola xiriiro: 392 015 3949
Ayaa loogu talagalay?
Jidka noocan ah wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay noocyo badan oo xaalado ah. Tusaale ahaan, markuu qofku ku adkaado inuu feejignaado, xifdinta macluumaadka iyo habraacyada (qoraallada la baranayo, jadwalka, hababka xisaabinta ...), muujinta fikradaha, akhrinta saxda ah iyo fahamka macluumaadka qoraalka iyo hadalka.
Xaaladaha kale, shakigu wuxuu khuseeyaa suurtagalnimada in canugga ama qofka dhallinta yar uu leeyahay awood aad uga sarreysa heerka caadiga ah sidaas darteedna, wuxuu u baahan karaa waxbarid shaqsiyeed.
Waxay si gaar ah waxtar u leedahay marka xaaladaha qaarkood laga shakiyo:
dyslexia (dhibaatooyinka akhriska)
dysorthography (dhibaatooyinka higaada)
Dyscalculia (Dhibaatooyinka xisaabinta)
dysgraphia (dhibaatooyinka soo saarista qoraal la fahmi karo)
ADHD (Feejignaanta iyo dhibaatooyinka foosha)
Hadal xumida hadalka
Dheeraad (heerka aqooneed ee aad uga sareeya heerka caadiga ah)
Wareysiga xayawaanka. Waa daqiiqad garasho loogu talagalay in lagu aruuriyo macluumaadka ku habboon taariikhda bukaan-socodka. Marxaladani waxay caawineysaa in la garto dhibaatada suurtagalka ah waxayna bixisaa hanuuninta koowaad si loo dejiyo wejiga qiimaynta.
Qiimaynta iyo qaabka ogaanshaha. Inta lagu jiro qiimeynta, cunuga (ama qofka dhalinyarada ah) waxaa la marsiin doonaa qaar ka mid ah imtixaanada oo leh ujeedada guud ee baaritaanka howlaha garashada iyo waxqabadka barashada (tusaale ahaan, heerka aqooneed, xirfadaha feejignaanta, xusuusta, luqadda, helitaanka aqrinta, qorista iyo xisaabinta).
Qoraalka warbixinta iyo wareysiga soo laabashada. Dhamaadka nidaamka ogaanshaha, warbixin ayaa la soo diyaarin doonaa kaas oo soo koobi doona wixii ka soo baxay wejiyadaha hore. Soo-jeedinta wax-ka-qabashada ayaa sidoo kale la soo sheegi doonaa. Warbixintan waxaa la gaarsiin doonaa oo loo sharxi doonaa waalidiinta inta lagu jiro wareysiga soo laabashada, iyagoo sharraxaya go'aammada la gaarey iyo soo-jeedimaha ka-hortagga natiijooyinka.
Maxaa xiga ee la sameyn karaa?
Iyada oo ku saleysan waxa ka soo baxay qiimaynta, dariiqooyin kala duwan ayaa la hirgalin karaa:
Haddii ay dhacdo cilado waxbarasho oo gaar ah, by wanaagga akhriyaa 170 / 2010, dugsiga waa in uu soosaaro dukumenti la yiraahdo Individated Didactic Plan (PDP), kaas oo uu ku tilmaami doono qalabka magdhawga iyo faafinta ee ay tahay inuu u adeegsado inuu ku habeeyo barista qaababka waxbarashada ilmaha / wiilka (sidoo kale eeg: ogaanshaha DSA: maxaa la sameeyaa?).
Marka laga hadlayo astaamaha kale, sida dhibaatooyinka feejignaanta, dhibaatooyinka maskaxda ama heer aqooneed oo aad u sareeya, had iyo jeer waa suurtagal in la dejiyo qorshe waxbarid shakhsi ahaaneed iyada oo loo marayo wareegtada wasiirka ee BES (Baahida Waxbarashada Gaarka ah).
Intaa waxaa dheer, shirarka hadalka Therapy si loo wanaajiyo dhinacyada la xiriira luqadda ama barashada (akhriska, qorista iyo xisaabinta), Koorsooyinka neerfaha si kor loogu qaado feejignaanta iyo xirfadaha xusuusta iyo koorsooyinka tababarka waalidiinta si loo helo istiraatiijiyadaha ku habboon ee lagu maareyn karo dhibaatooyinka dhaqan kasta ee ilmaha.